Mayelana neGiacomo da Vignola kunye neNkcubeko yokuThuthukiswa kweNkcubeko
UbuGcisa bobuGcisa I-Architecture
Biography yeGiacomo da Vignola
I-Renaissance Mannerist Architect (1507-1573)
Umcwangcisi kunye nomculi uGiacomo da Vignola (owazalwa ngo-Oktobha 1, 1507 eVignola, eItali) wabhala imithetho ye-Classical of proportion eyayithonya abayili kunye nabakhi kwiYurophu. Ngaphandle kukaMichelangelo noPalladio, iVignola yaguqula iinkcukacha zezakhiwo zobugcisa kwiifom ezintsha ezisasetyenziswa namhlanje. Eyaziwa nangokuthi nguGiacomo Barozzi, uJacopo Barozzi, uBarchichio, okanye nje uVignola (obizwa ngokuba yi-veen-YO-la), lo myili waseNtaliyane wayehlala ekuphakameni kwexesha lokubuyiselwa kweNkwenkwezi, ukuguqulwa kwezakhiwo ze-Renaissance ukuya kwisakhiwo seBaroque esihle.
Ixesha likaVignola ekhulwini le-16 libizwa ngokuba yiMannerism.
Ubugcisa baseTaliyane bukhula ngexesha lento esiyibiza ngokuba yi- High Renaissance , ixesha le-Classic proportional and symmetric based on nature. Indlela entsha yobugcisa yavela kwi-1500s, enye yaqala ukuphula imithetho yale migaqo yekhulu le-15, isitayela saziwa ngokuba yiMannerism. Abaculi kunye nabacwangcisi babezimisele ukunyanisela iifom-umzekelo, umzobo wesifazane unokuba nentamo ephakanyisiweyo kunye neminwe ebonakala ibombile kwaye ifana nayo. Ukuqulunqwa kwakukho ngendlela yamaGrike kunye namaRoma aesthetics, kodwa engokoqobo. Ukwakhiwa kwezakhiwo, i- pediment pediment yaba yinto evuliwe, ijika, kwaye ivulekele ekupheleni. I-pilaster yayiza kufana neklasi yeClassical, kodwa yayiyiyo yokuzihombisa endaweni yokusebenza. I-Sant'Andrea del Vignola (1554) ngumzekelo omhle weepilisi zangaphakathi zaseKorinte. Icawa encinci, ebizwa ngokuba yi-Sant'Andrea ngeFlaminia, ibalulekile kwi-oval yoluntu okanye iplani ye-elliptical, ukuguqulwa kukaVignola kwimilo yobuGothi yendalo.
Umakhi ovela kumpuma kweItali wayelulela imvulophu yenkcubeko, kwaye iBandla elinobuqili elinamandla liye linyathela umyalelo oselwayo. La villa di Papa Giulio III (1550-1555) ngoPapa Julius III kunye neVal Caprarola (1559-1573), ebizwa nangokuthi i-Villa Farnese, eyenzelwe iKalidina uAlandandro Farnese zombini ibonisa imiqhele ye-classical-oval courtyards e-Vignola, ehamba ngeetyhula, iikholamu ezivela kwiimilasi ezahlukileyo ezahlukileyo.
Emva kokufa kukaMichelangelo ngo-1564, uVignola waqhubeka nomsebenzi kwi-St Peter's Basilica waza wakha izindlu ezimbini ezincinci ngokwemiqathango kaMachelangelo. UVignola ekugqibeleni wathatha iingcamango zakhe kwiSixeko saseVatican, nangona kunjalo, njengoko wayecwangcise iS'Anna dei Palafrenieri (1565-1576) kwisicwangciso esifanayo sokuqala esiqalile eSiteAndrea.
Ngokuqhelekileyo lo mbandela wezotshintsho lubonakala nje ngokuba yiNtlawulelo yaseNtaliyane , njengoko yayingundoqo kwiItali ngexesha lokubuya kwexesha lokuzalwa. Ukunikwa kweMveli kwakhokelela indlela yokubuyisela ubuNtu kwiBaroque. Iiprojekthi eziqalwe nguVignola, ezifana neCawe yaseGesù eRoma (1568-1584) kwaye igqitywe emva kokufa kwakhe, zidlalwa njengeBaroque ngesitayela. Ukuhlobisa i-Classicism, eqaliswe ngabavukeli be-Renaissance, yatshintsha into eya kuba yiBaroque.
Nangona uVignola wayengomnye wabakhi bezakhiwo ezidumeleyo ngexesha lakhe, ubugcisa bakhe buvame ukugqithiswa yi- Andrea Palladio kunye noMichelangelo owaziwayo . Namhlanje iVignola ingaziwa ngokunyusa ama-Classical designs, ngokukodwa ngendlela yeefolumu. Wathatha imisebenzi yesiLatini yomprofeti ongumRoma waseVitruvius waza wadala i-roadmap yolwimi yokuyila. Ebizwa ngokuba yiRegola delli cinque ordini, ukupapashwa kwe-1562 kwaqondakala lula ukuba iguqulelwe kwiilwimi ezininzi kwaye yaba yikhokelo ecacileyo yabakhi belizwe leNtshona.
I-Vignola, i -Five Orders of Architecture , ichaza iingcamango kwiincwadi ezili-10 ze-Architecture, De Architectura , ngu-Vitruvius endaweni yokuguqula ngqo. UVignola uchaza imithetho ecacileyo yokubaluleka kwezakhiwo kunye nemigaqo yakhe yokujonga iyakwazi ukufunda namhlanje. I-Vignola icatshulwe (abanye bathi badibanise) into esiyibiza ngokuba yi-Classical architecture ukwenzela ukuba kwanamakhaya akwa-Neocalssical namhlanje anokuthiwa yenzelwe, ngokwengxenye, evela emsebenzini waseGiacomo da Vignola.
Kwizakhiwo zokwakha, abantu abazange baqhelane negazi kunye ne-DNA, kodwa abacwangcisi bahlala benxulumene neengcamango. Iimbono ezindala zoyilo kunye nokwakhiwa kwakhona kufumaneka kwakhona kwaye kudluliselwe-okanye kudlulile-lonke ixesha ngelixa litshintshile njalo, njengento yokuziphendukela kwemvelo. Iimbono zabo zazithinta njani iGiacomo da Vignola? Nguwuphi na owakhiwa kwi-Renaissance abafana nomqondo?
Ukuqala kunye noMichelangelo, uVignola noAntonio Palladio babengabakhi bezokwakha izithethe zaseClassiki zeVruvius.
UVignola wayengumakhi wezakhiwo okhethwe nguPapa Julius III ukwakha izakhiwo ezibalulekileyo eRoma. Ukudibanisa imibono ephakathi, i-Renaissance, kunye neBaroque, icawa yaseVignola yenzelwe i-ecclesiastical architecture kangangeminyaka emininzi.
UGiacomo da Vignola wafa eRoma ngoJulayi 7, 1573 waza wangcwatyelwa kwipapasho yezobugcisa beClassical, i-Pantheon eRoma.
I-Canon yeMithetho emihlanu yeeNkcukacha zoBuchule
Umcebisi wabafundi ekudwebeni nasekusebenzeni iMithetho emihlanu ye-Architecture nguPeter Nicholson, ngo-1815
Imiyalelo emihlanu yokwakha; ukukhutshwa kwemithunzi kunye nemigaqo yokuqala yokwakha, esekelwe kwinkqubo yeVignola nguPerre Esquié, ngo-1890 (funda mahala kwi-archive.org)
Ukukwenziwa kwimiyalelo emihlanu yokwakha: ihlanganiswe kwimisebenzi kaWilliam Chambers, uPalladio, iVignola, iGwilt kunye nabanye nguFred T. Hodgson. c. 1910 (funda ikhululekile kwi-archive.org)
> Umfanekiso we-Sant'Andrea del Vignola ngo-Andrea Jemolo / Electa / Mondadori Iphothifoliyo ngokusebenzisa i-Getty Izithombe (ihlanjwe)
Ikhaya leKhaya elenziwe nguMfazi we-1800s
Iintlanzi ezili-10 ze-Architecture zokuThuthukisa
Izizathu ezili-10 zokuba u-Architects Uthando I-LEGO Movie
I-Romanesque Architecture kunye ne-Art - Kutheni konke?
Sonke SinoMoya Wehlabathi Emva Kokufa Kwethu
Ziziphi iiNkqubo kunye neNgxowa yeZikolo zeCharter?
Ziziphi ii Microplastics?
Abantu abadaka i-Drunk abaye bahlonywa ngubo ababizwa ngokuba ngabahlobo
Inkomfa ye-Tank O-Ring esikhundleni
Yiyiphi Isabelo ekubhaliseni?
Indlela yokuLawula izilwanyana zaseJapan
Musa ukuyikhupha: Ukulwa neengcinezelo zeDancer iingxaki zabantwana
Imfazwe YaseMelika: Ukuzinikela kwi-Appomattox
Imilinganiselo yeStatistical of Unemployment
Kutheni i-4 x 9 yeyona ndawo iLwandle oluPhambili kwiTable Pool Size
Iimpawu eziqabulayo malunga namaKriketi
Ukufundisa Ukuphulaphula ukuqonda kwi-Special Ed Kids